Indlu yoMthi kumbindi wePaihia
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGarth
Tree House iflethi ezimeleyo. Yonwabela indawo engqonge amatyholo kunye neembono zolwandle ukusuka kumgangatho. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ukulungiselela ukutya, i-ensuite, ibhedi enkulu, iitawuli zaselwandle, i-BBQ. Vuka uhlabe ingoma yentaka. Umgama olula wokuhamba ukuya kumbindi wedolophu.
Igumbi elinokuzimela ngokupheleleyo kwiindwendwe ezizenzela ukutya. Embindini, indawo ezolileyo. Ulwandle, iindawo zokutyela, i-wharf kunye neziko ledolophu kumgama olula wokuhamba. Ukubekwa kwegadi kunye nehlathi, iintaka zemveli.
Sihlala phezu kwenduli ejongene neBhayi, ekupheleni kwesitrato esizolileyo. Le ndlu ibekwe kwityholo elinemithi ephantse ikuwole. Abantu basekuhlaleni abanobuhlobo kwisitalato sethu ikakhulu badla umhlala-phantsi. Ungahamba uye kuPaihia ngasemanzini, kwindawo zokutyela kunye neevenkile ngemizuzu eli-10.
Umbuki zindwendwe ngu- Garth
Samkela zonke iindwendwe zethu kwaye sihlala kwindawo. Siye sahlala kwiBay of Islands iminyaka emininzi kwaye sinobutyebi bolwazi kule ndawo intle. Siyavuya ukukunceda ucwangcise uhambo lwakho.